Zvigadzirwa zveuchi: Iyo yekutanga Superfoods
Anozvininipisa Nyuchi chimwe kukosha zvipenyu zvakasikwa. Nyuchi zvinokosha kuti kugadzirwa kwezvokudya kuti isu vanhu kudya nokuti pollinate miti sezvo Vanounganidza nekita kubva nemaruva. Pasina nyuchi taizova nguva zvakaoma kukura zvikuru zvokudya zvedu.
Kuwedzera pakubatsira isu edu zvokurima zvinodiwa, nyuchi kuti zvinogadzirwa zvakawanda kuti tinogona kukohwa uye kushandisa. Vanhu vave nekunhonga uye kuvashandisa kwezviuru zvemakore uye kuvashandisa zvokudya, uhwiro, uye mishonga. Nhasi, sayenzi yemazuva iri uchibata kuti chii tagara kuzivikanwa: Chepiri vane somushonga uye muviri ukoshi hukuru.
Uchi ndiye wokutanga uye kupfuura pachena chigadzirwa kuti chinouya mupfungwa kana kufunga Chepiri. Zviri nyore kuwanikwa pazvinowanikwa muzvitoro uye vanhu vazhinji vanoshandisa nayo sezvo shuga panzvimbo yakanatswa shuga ose. Uchi ndiye chikafu kuti nyuchi kuti nekunhonga nekita kubva nemaruva. Vanodzinga nekita kupinda uchi kuburikidza regurgitating nayo uye uchiita nayo sasana kuti pfungwa yacho shuga hunoumba zvayaigadzirwa chikuru. Kuwedzera shuga, uchi rine zvisaririra uwandu mavhitamini, zvicherwa, faibha, mapuroteni, uye zvimwe zvinhu.
The yeshoko uchi nevamwe uye akanaka pane dzimwe shuga. Asi zvakanakira uchi tiende kure pakubika uye kutapira. Uchi makomborero akawanda utano, zvose sechinhu unogona kudya uye sezvo kukamura uchishandisa mishonga a. Zvisinei ziva, kuti uchi here kushandisa inofanira mbishi uye unprocessed.
Antioxidants . Uchi nezvi- antioxidants, izvo kubatsira kugadzira kukuvadzwa miviri yedu kwezvakatipoteredza muchetura. The zvasviba uchi, yakawanda antioxidants chipo mariri.
Chisimbwa ruyamuro . Raw uye unprocessed uchi rine allergens kubva zvakatipoteredza, kusanganisira pollens, chakuvhuvhu, uye guruva. Kana iwe udye zvishoma unfiltered uchi kuti akaberekwa munzvimbo menyu ose zuva, uchaona kuti wawana zororo kubva chisimbwa yenyu zviratidzo. By dosing pamwe allergens iwe uvake dzinongoitika kutapata kwavari.
Zvomudumbu utano . Uchi zvakaratidzwa kuvandudza kugaya munzira mbiri. In rokumusoro nemudumbu zviri antibacterial ehupfumi uchi anogona kuderedza kwevari utachiona kuti kukonzera maronda. Ari muura uchi inopa probiotics kuti kubatsira kugaya.
Kurapa maronda . Somunhu kukamura uchishandisa anonhuwira, uchi inogona kushandiswa kurapa maronda. It ane inorwisa mabhakitiriya migumisiro uye akachengeta mavanga yakachena kuitira kuti kuporesa nokukurumidza.
Anti-anogumbura anokonzerwa. Chenjera kuzvimba wechisikigo chikamu yokuporeswa, asi rakadzika-sosaiti, chisingaperi kuzvimba kuti kunotambudza vokuAmerica vakawanda kudaro nokuda murombo zvokudya zvinokuvadza. Uchi anozivikanwa kuderedza chirwere kuzvimba mu arteries chinowedzera mwoyo chirwere. Rinotaurawo nechokumusoro nhamba pakati pezvakanaka nezvakaipa remafuta akawandisa.
Kukosora kudzvinyirira. Nguva inotevera une dzihwa kuwedzera yetea uchi kuti mukombe inopisa tii. Uchi anovanza ane chikosoro uye panewo zvimwe uchapupu kuti kubatsira kuporesa kuchitonhora uye kuderedza yaro refu.
Nyorai-2 Diabetes. Nokuti vanhu vane mhando-2 cheshuga, zvakakosha hadzizokuyeredzi muropa pamwe shuga. Uchi anosunungurwa zvishoma nezvishoma vachipinda muropa pane yakaidzwa shuga, izvo zvinoita nani sarudzo kuti chirwere cheshuga.
Bee mukume rakasiyana uchi. Zviri mukume kuti nyuchi ndaitora kubva maruva uye kugara mukati granules diki. Nyuchi, mukume balls zvinochengeterwa mudura mumukoko uye kushandiswa seinokonzera mapuroteni. Zvavakanga kurongedza mukume mumukoko zvimwe zvinoriumba vari pazviri kusanganisira makemikari kubva mate nenyuchi wacho, mabhakitiriya, uye nekita.
Vanhu, nyuchi mukume chinhu muviri Powerhouse uye pane zvikonzero zvakawanda kurishandisa sechikamu dzenyu dzose kudya. Zvakakosha kuziva kuti nyuchi mukume haiwaniki mamwe Chepiri souchi uye youmambo mondo. Uyewo ngwarirai nenyuchi mukume zvigadzirwa pamwe yokuvirisa. Aya haasi dzinongoitika zvinhu uye angatokwanisa kukuvadza.
Complete kudya kunovaka. Bee mukume rine zvose zvinovaka muviri isu vanhu vanoda mairi granules duku. Chine mapuroteni, makabhohaidhiretsi, mafuta, antioxidants, mavhitaminzi, uye zvicherwa. Chinhu chikafu chakakwana.
Weight kuzvidzora. Bee mukume wawanikwa kubatsira vanhu kurasikirwa uye kushandisa uremu kana kushandiswa senzira kwokunwa muviri uye kurovedza muviri nguva dzose. Zvingaita kubatsira masero muviri muviri.
Zvomudumbu utano. Kutsvakurudza kwakaratidza kuti kudya nyuchi mukume kunogona kuvandudza utano hwako zvomudumbu. Izvi zvinogona kutsanangurwa kuti rine faibha uyewo probiotics.
Kupererwa neropa. Varwere neta neta apa nyuchi mukume ruzivo kuwedzera masero matsvuku eropa iri muropa. Sei izvi zvakaitika haina kunzwisiswa, asi nyuchi mukume supplementation sokuti kubatsira vanhu vane kupererwa neropa.
Blood remafuta akawandisa mumatunhu. Bee mukume somunhu chinamatidzwa yavewo zvakaratidzwa waidzora kwevari remafuta akawandisa muropa. Zvinoita kwevari remafuta akawandisa zvakanaka (HDL) kukwira, ukuwo kwevari remafuta akawandisa dzakaipa (LDL) kuburukira.
Dziviriro Cancer. Muzvidzidzo pamwe mbeva, nyuchi mukume ari kudya chaitadzisa paumbwe anomera.
Hurefu. Ongororo dzakaratidza kuti nyuchi mukume chinowedzera kuti tava kuderera dzimwe maitiro kukwegura. Zvinoita sokuti vaonekere ndangariro, kukurudzira muviri, simbisa mwoyo uye arteries, uye zvinopa zvokudya zvinovaka muviri vanhu vakawanda havana sezvavanokura.
Chisingafaniri kuvhiringidzwa uchi, iyo anodya nenyuchi, youmambo mondo ndiyo zvokudya mambokadzi nyuchi, uyewo mazana ari nyuchi. Royal mondo mumwe zvinhu mutoro kuchinja kuva dukutu kuva mambokadzi pane Nyuchi. The Zvinoumba youmambo mondo zvinosanganisira mvura, mapuroteni, shuga, zvishoma mafuta, mavhitaminzi, antioxidants, asingaurayiwi zvinhu, zvisaririra zvicherwa, uye makemikari. Kunosanganisirawo remubatanidzwa inonzi mambokadzi nyuchi acid, izvo dziri kuongororwa nevatsvakurudzi, uye iyo vakafunga kuti kiyi kuchinja zvake Nyuchi kupinda mambokadzi.
Kuchengetedza ganda. Royal mondo anogona kuwanikwa mune dzimwe kukamura uchishandisa runako zvigadzirwa nokuti zvinogona kubatsira kudzivirira ganda kubva zuva. Zvingaita gadzirisa mamwe kukuvara kare anokonzerwa zuva, kusanganisira kudzorera collagen uye kuderedza maonero dzebhurauni makwapa.
Remafuta akawandisa. Sezvo tiine uchi uye nenyuchi nepfuma, unoparadza mondo youmambo zvakaratidzwa chinonengaidza kubuda zvakanaka uye zvakaipa remafuta akawandisa muropa.
Anti-bundu ehupfumi. Vamwe netsvakurudzo kuti youmambo mondo, kana jekiseni muzvitokisi kenza, anogona kuderedza kukura anomera.
Pamuviri utano. Vamwe vatsigiri youmambo mondo vanoti chinogona kuvandudza mukadzi wembereko uye kunyange atange kufunga zviratidzo PMS.
Zvomudumbu utano. Royal mondo rinozivikanwa kuti kukwanisa adzikamise dzakawanda mudumbu mamiriro kubva nemaronda kuti fufune kuti kupatirwa.
Zvimwe Zvigadzirwa Zvechi
Raw, Organic, uye unprocessed uchi, nyuchi mukume, uye youmambo mondo zvose nyore kuwana yako kufarira utano chitoro, kana nani asi, munharaunda nyuchi. Pane zvimwe zvinhu shoma chinoitwa nyuchi dziri mumukoko dzisina uyewo kudzidza uye vasina sezvo nyore kuwana maoko ako pamusoro. Namo Somuenzaniso, ndiye anotsvedzerera anobuda pamiti nemakwenzi zvinhu kuti nyuchi kuti kubva muto uye izvo vanoshandisa kunama makatsemuka duku uye mumakomba mumukoko.
Vanhu, namo zvinogona kushandiswa kukamura uchishandisa mafomu. Hachisi muviri chikafu chigadzirwa, kunyange rinogona kushandiswa kugadzira kutsenga chingamu. Namo ane antibacterial zvivako uye yagara kushandiswa senzvimbo kukamura uchishandisa mushonga maronda, mburwa, uye ganda rashes. Limited uchapupu hunoratidza kuti kubatsira kubata herpes, zino utachiona, uye anogumbura zvirwere. Chinoratidza hakusi hunogutsa asi namo yakachengeteka kushandisa.
Wakisisi zvakakora fuma kuti nyuchi kushandisa kuti vakwire unorema zvavo uchi mizinga. Hazvina dzinodyiwa pakuti hazvina oma kugaya. Hazvisi muchetura, asi imi hamuna kuwana zvizhinji zvokudya achaita mariri kana ukaedza kuudya. Chii Zvakanaka ari kuita zvakasikwa zvizoro, Sipo, mumakenduru, uye makenduru.
Uchishandisa Bee Products mu Smoothies
Uchi, nyuchi mukume, uye youmambo mondo anogona zvose ichawedzerwa kuti smoothies yenyu. Mukuru pamusoro nyuchi mukume nouchi ndechokuti kuravidza mukuru uyewo kukupa zvinoshamisa pautano. Bee mukume hakusi souchi, asi anoita watenga munuhwi. Iri akapfuma chikafu, saka kutaura nayo zvishoma nezvishoma. Kutanga tsanga shoma panguva uye zvishoma nezvishoma zvinowedzera mari dzaungashandisa pakati imwe yetea uye spoon imwe smoothie. Edza ndokusanganisa nyuchi mukume kupinda smoothies enyu uye kumwaya pamusoro akafanana anosasa pamusoro aizikirimu. Nokuti vose smoothie dzangu Quick zvinoratidza nyuchi mukume, baya kubatana pazasi.
Bee mukume Smoothies
Unogona kuwedzera uchi zvakawanda kune smoothies wako panzvimbo imwe shuga ungashandisa. It anoroora zvakanaka nevamwe siyana zvose, asi kunogonawo kuvhenekera pamusoro wayo. Nguva dzose tsvaka Organic uye mbishi uchi uye kana iwe unogona kuwana chigadzirwa akaita munharaunda, ndizvozvo kunyange nani. Ongorora musika pedyo murimi dzako kuti uchi womunharaunda.
The yeshoko youmambo mondo haisi rifadze vose. Rinogona kuva cake, uye sezvo vamwe muirondedzere, fishy zvishoma. Chinofadza ndechokuti iwe chete vanoda zvishoma nayo (pamusoro chipunu smoothie) kuti noutano hwakanaka uye unogona masiki payo smoothie kwako siyana hwakasimba. Kutaura zvazviri, edza pairing nokuripisa uchi kuvanza pakubika.
Chepiri anoshamisa nokuda kwavo muviri tigutsikane uye nokukwanisa kuporesa muviri mune dzakawanda. Nguva dzose ngwarira kana uchishandisa zvigadzirwa izvi kana uri sema nyuchi kana kufunga iwe angava. Nepo zvisingawanzoitiki, kana muri sema kuti nenyuchi yoruma, mumwe Chepiri kungaita kuti maitiro pamwe.
Chii ruzivo wako Chepiri? Une kufarira? Ndapota udza nokusiya mhinduro pazasi.
Post nguva: Dec-13-2016